Dhammaan wixii ku saabsan iPhone ee ku jira iPhone News | News IPhone (Bogga 12)
Apple waxay ka kireysan kartaa injineerada Halkan, khariidadaha GPS-ka ee Nokia la iibiyay
Sida ku xusan wararkii ugu dambeeyay, Apple waxay ka kireysanaysaa injineero Halkan, softiweerkii weynaa ee GPS ee ay horey u laheyd Nokia.
Sida loo isticmaalo nidaamka xiddigga ee Muusiga ee iOS 10.2
Qiimeynta Xiddiga ee barnaamijka Music-ka ayaa kusoo laabtay imaatinka macruufka 10.2. Mashruucan waxaan ku tusineynaa sida loo isticmaalo nidaamkan.
Tilmaamaha "Isticmaal AirPods" ayaa hadda loo heli karaa iibsadayaasha cusub
Apple waxay daabacday hage sharraxaya sida aan u isticmaali karno AirPods markay gaadhaan adeegsadayaasha ugu horreeya ka hor Kirismaska.
Sida loogu wareejiyo macluumaadka iPhone-kayga uguna wareejiyo casriga casriga ah ee Android qaab fudud
Apple waxay bilowday dhowr sano ka hor codsi ku saabsan Google Drive kaas oo noo ogolaanaya inaan macluumaadka ka wareejino ...
Ma rabtaa inaad hesho AirPods kahor Kirismaska? Ka hel Ebay wax ka badan € 1000
Ka dib markii la bilaabay AirPods-ka Apple Store-ka khadka tooska ah, Apple waxay kordhineysaa waqtiga bixinta iyo xayeysiinta iibka ayaa bilaabanaya inay ka soo muuqdaan Ebay for 1000
Beddelka ugu wanaagsan, uguna jaban, ee loo yaqaan Apple AirPods
Ka dib markii la bilaabay Apple's AirPods, waxaan kuu soo bandhigayaa qaar ka mid ah sameecadaha maktabadda leh ee magnetized sida bedelka ugu fiican ee kaliya in ka badan labaatan euro
Sida loo demiyo VoiceOver haddii aad shil ugu rogtay
IPhone-kaagu ma kula hadlayaa markay tahay? IPhone-kaaga miyey ka jawaabayaan? Shaashaddu ma rogmato? Waxaa laga yaabaa inaad VoiceOver daartay Waxaan kuu sharxeynaa sida loo baabi'iyo.
AirPods waxay garaaceen Apple Store usbuuca soo socda
Toddobaadka soo socda Apple wuxuu bilaabi doonaa inuu ku muujiyo AirPods-ka Apple Store, toddobaad ka dib markii lagu iibiyey websaydhka Apple.
Sida laga soo xigtay Apple, BeatsX cusub ayaa la heli doonaa bisha Febraayo
BeatsX-da cusub ayaa suuqa soo gali doona bisha Febraayo ee soo socota sida ay shirkaddu ku shaacisay degelkeeda.
Apple waxay ku maalgashan lahayd $ 1.000M Teknolojiyada SoftBank
Waa iska xanta, laakiin wali waa layaab: Sida ay sheegayaan wararka xanta qaarkood, Apple waxay maalgashi aan ka yarayn $ 1.000 billion ku samaynaysaa SoftBank Technology.
Ugu dambeyntii!: AirPods hadda waa la heli karaa. Gaarsiinta toddobaad gudihiis
Ugu danbeyn! Dhowr daqiiqadood ayaan horeyba u iibsan karnaa Apple's AirPods, sameecadaha dhegaha leh ee wireless-ka ah. Dhaqso!
Dhageystayaasha maqalka, samaacadaha dhagaha ee cusub ee ka socda Bose oo kaa caawin doona inaad si fiican uga maqasho jawiga buuqa badan
Isaga oo aan samayn buuq badan, Bose waxay bilawday Dhagaha, samaacado noo ogolaanaya inaan si fiican wax uga maqalno deegaanka ay ka jiraan buuq badan.
Calaamadaha gobolka qaarkood ayaa lagu dari doonaa Unicode sanadka 2017
Unicode waxay ku dareysaa xoogaa calammo goboleed ah sanadka soo socda nooca cusub ee Emoji 5.0. Codsiga koowaad ee ...
Macluumaadka cusub ayaa sidoo kale xaqiijinaya in AirPods ay imaan doonaan kahor Kirismaska
Dulqaad yar oo dheeraad ah: ilo cusub ayaa xaqiijinaya in AirPods ay imaan doonaan kahor Kirismaska, laakiin ma waxaa jiri doona dhagaha madaxa qof walba?
Sida laga soo xigtay B&H, BeatsX waxaa laga yaabaa inaysan imaan ilaa guga soo socda
Dib udhaca cusub ee sameecadaha dhagaha ee Apple, sida uu sheegayo iibiyaha B&H: BeatsX wali waxay qaadan doontaa labo ilaa seddex bilood inay ku iibiso.
Kamerar ZOOM Lens Kit wuxuu hagaajiyaa kamaradda iPhone 7 Plus kuwa weydiista wax yar
Miyaad u maleyneysaa in kamaradda iPhone 7 Plus wali gaabis tahay? Hagaag, waa inaad tijaabisaa xirmada muraayadaha ee ay shirkada Kamerar ku dartay kiiskan.
Super Mario sawirrada
Waxaa jira maalmo yar oo kayar inta Super Mario Run laga heli karo App Store. In kasta oo taariikhdaasi timaaddo, waxaannu ku tusin doonnaa dhowr taariikh oo Mario ah
AirPods waa la daahi lahaa dhibaatooyinka isku xirnaanta awgeed
AirPods waa la daahi lahaa sababo la xiriira dhibaatooyinka isku xirnaanta ee Apple ay tahay inuu xaliyo daqiiqada ugu dambeysa ee la xiriirta Bluetooth
Gmail ee macruufka waxaa lagu cusbooneysiiyay warar xiiso leh
Waxaan haynaa cusbooneysiin cusub oo ku saabsan codsiga oo maareynaya emaylka Google ee ku saabsan qalabkeena iOS.
Apple waxay heshiis la gaadhay shirkadda ugu weyn ee soo saarta marawaxadaha dabaysha laga dhaliyo
Apple waxay dhowaan heshiis la gaadhay shirkadda Xinjiang Goldwind Science & Technology, oo loo yaqaan soo saaraha ugu weyn ee marawaxadaha dabaysha ee ...
Midowga Yurub wuxuu sii wadaa qorshihiisa ku saabsan ciribtirka qulqulka sanadka 2017
Xubnaha Guddiga Yurub waxay kulmeen Arbacadii la soo dhaafay si ay uga wada hadlaan xeerarka qabyada ah ee mashruuca ...
Apple waxay dooneysaa inay ku bixiso filimka filimka 'iTunes'
Apple waxay dooneysaa inay bixiso filimaan tiyaatarada laga sii daayo iyada oo loo marayo iTunes si kiro ah, wadahadaladu waxay umuuqdaan inay horay usocdaan
Maxkamadda Sare waxay la safan tahay Samsung dagaalka ay kula jirto shirkadda Apple
Apple waxay dharbaaxo ka heshaa maxkamadaha: Maxkamadda Sare waxay qayb ka mid ah sababaha siineysaa Samsung dagaalka shatiga ee u dhexeeya labada shirkadood.
Kaamirada iPhone-ka waxay qaadataa 8 ka mid ah 10-ka meelood ee ugu badan ee isticmaalka Flickr
Kaamirada iPhone-ka ama, waa isku mid, kamaradaha astaamaha Apple ayaa mar kale ku guuleystay sida kamaradaha ugu badan ee loo isticmaalo Flickr.
Waxaan hadda ku raaxeysan karnaa ku-dallaca induction-ka iPhone 7-keena kiisaska Mophie
Ragga Mophie hadda waxay sii daayeen taxane cusub oo kiisas batari ah oo loogu talagalay iPhone 7 kaas oo u oggolaanaya in lagu buuxiyo induction.
Midab casaan oo macquul ah oo ku saabsan iPhone 7s iyo 7s Plus
Apple waxay bilaabi kartaa noocyada cusub ee iPhone 7s iyo 7s Plus oo ah midab casaan cusub. Intaa waxaa dheer, waxaa sidoo kale jira warar xan ah oo ku saabsan waxyaabo kale oo lagu daro, sida shaashadda OLED
Khariidadda kumbuyuutarka ee 'Square virtual' ayaa hadda la jaan qaadaya Apple Pay
Maanta waxaan ka hadlaynaa Square, kaarka dalwaddii ee la jaan qaadi doona Apple Pay muddo gaaban.
TIME waxay kuxirantahay Apple Airpods inuu yahay kan ugufiican sanadka
In kastoo aan wada sugeyno bilowga rasmiga ah ee Apple AirPods cusub, majaladda caanka ah ...
Newton ayaa cusbooneysiisa oo isha ku haysaa Waxyaabaha Shisheeyaha ah ee ku jira demo
Nala joog oo soo hel waxa ku cusub Newton Mail ee loogu talagalay iOS cusbooneysiinta maanta.
Booliska UK waxay doorteen inay 'xadaan' iphone-yada dambiilayaasha aan la furin
Hab cusub, oo leh soo jiidasho yar iyo shirkadaha Israel ee ku lug leh, laakiin waxay umuuqataa inay u shaqeyneyso sidoo kale kuwa kale.
Tilmaamaha iyo tabaha loogu talagalay marka Candy Crush uusan soo rarin doonin
Candy Crush ma rarro! Ma dhamaadka adduun baa! Maxaan sameeyaa Maqaalkan waxaad ku haysaa dhowr tilmaam iyo tabaha loogu talagalay marka ciyaarta caanka ah ay go'aansato inayan rarin.
Ka taxaddar xeedho aad iibsato, 99% khatar ayey noqon kartaa
Urur dawladeed oo Ingiriis ah ayaa xayaysiiya in 99% xeedho been abuur ah oo la iibiyo ay khatar ku noqon karaan dadka isticmaala.
Hadda waxaad ka iibsan kartaa Apple Store-kaaga Apple Watch
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee barnaamijka Apple Store ayaa looga golleeyahay in laga dhigo dukaameysi xitaa dhaqso, kaliya waqtiga time
MEE maqalka M9B dib u eegista sameecadaha dhegaha la '
Daahfurka noocyada cusub ee iPhone 7 ayaa calaamadeeyay bilowga dhammaadka xiriirka taleefanka ee ...
WhatsApp ayaa si tartiib tartiib ah u joojin doonta la jaan qaadida noocyadii hore ee iOS
Go'aankan cusub ee lagu yareynayo is waafajinta shirkadda fariimaha degdegga ah waxay kor u qaadeysaa in ka badan fin.
Apple wuxuu sii daayaa macruufka 10.2 Beta 5 ee loogu talagalay Soo-saareyaasha iyo Beta Dadweynaha
Apple ayaa soo saartay beta cusub oo ah iOS 10.2, kii labaadna wuxuu ahaa toddobaad, nooca dadweynahana wuu imaan karaa isla usbuuca soo socda
99% xeedho been abuur ah ayaa khatar ku ah aaladaha Apple
Tani waa wax u muuqan kara wax iska cad inkasta oo ay run tahay in aan dhamaanteen iibsanay ama aan leenahay xeedho ...
Sida loo soo degsado waxyaabaha ku jira Netflix si aad uga daawato khadka qadka
NEtlifx horeyba waxay kuu ogolaaneysaa inaad soo dejiso waxyaabaha aad ka daawan karto offline, waxaan kuu sharaxeynaa faahfaahinta si aadan u helin lama filaan aan fiicneyn.
Dhammaan wixii ku saabsan Apple Pay: dejinta iyo hawlgalka
Waxaan kuu sharraxeynaa sida Apple Pay u shaqeyso, laga soo bilaabo qaabeynta ay ku sameysan tahay taleefannadaada iPhone iyo Apple Watch illaa nidaamka loo sameynayo bixinta.
AluCharge, Xtand Vent iyo Head Stand, sedex wax soo saar oo aad u wanaagsan Just Mobile [DIB U EEGID]
Waxaan haddaba falanqeyneynaa 'Xtand Vent', 'HeadStand' iyo 'AluCharge', oo ah seddex aaladood oo moobiil oo kaliya ah oo aan si dheer uga hadli doonno.
Laba iyo toban dib u eegista South Fermata: istaag oo xeedho sameecadahaaga
Waxaan tijaabinay Fermata, Taleefoonka madaxa ee laba iyo tobanka koonfureed oo sidoo kale ah xeedho, taasina waxay sidoo kale ku siineysaa fiilo dheeri ah oo USB ah qalab kale.
Sida loo adeegsado Apple Pay-ka Spain iyadoo loo adeegsanayo iPhone-kaaga, Apple Watch iyo Mac
Apple Pay waxay bilaabaysaa inay ka shaqeyso Isbaanish laga bilaabo 1da Diseembar waxaanuna kuu sharxaynaa talaabo talaabo ah sida loo qaabeeyo loona isticmaalo
Apple Pay ayaa berri imaan doonta Spain iyada oo laga soo qaadi doono gacanta Banco Santander
Apple Pay waxay imaan doontaa Spain laga bilaabo bisha Diseembar 1 oo ka timid gacanta Banco Santander, iyadoo fulineysa ballanqaadkii Tim Cook.
IPhone 8 wuxuu jabin doonaa diiwaanka iibka ee iPhone 6
IPhone 8 wuxuu jebin karaa diiwaanka iibka ee iPhone 6 oo leh seddexdiisa nooc, oo ay ku jiraan AMOLED iPhone oo leh shaashad qalooca
Plantronics BackBeat FIT, dhawaaq wireless ah oo loogu talagalay cayaaraha [SWEEPSTAKES]
Plantronics waxay noo keeneysaa samaacado sameecado oo cusub oo leh cod aad u weyn oo waliba si fiican u diida biyaha iyo dhididka
Apple wuxuu ku qaataa 66% suuqa Hindiya qalab heer sare ah
Ragga ka socda Cupertino ayaan si sax ah waqti fiican ugu joogin dalka cusub ee ay isku dayayaan inay diiradda saaraan ...
Hubi haddii iPhone 6s uu ku jiro barnaamijka beddelka batteriga ee Apple
Apple wuxuu bilaabaa barnaamijka badalashada batteriga ee iPhone 6s kuwaas oo la kulmaya arrimaha waxqabadka batteriga.
Cyber ​​Monday on Amazon, kuwani waa heshiisyada ugu fiican
Miyaad u maleyneysay in heshiisyadu dhammaadeen ka dib dhammaadkii Jimcaha Madow? Waad khaldantay. Maanta waa Cyber ​​Monday oo waxaa jira qiimo dhimis ka fiican.
Sida looga saaro SPAM Kalandarka iCloud
Spam cusub ayaa daadadinaya jadwalka taariikhda ee adeegsadayaal badan oo iOS ah oo leh casuumaadyo aan loo baahnayn oo ka yimid soo diro aan la garanayn. Waxaan ku siinaynaa laba xal.
Sida loo sii daayo boos on your iPhone aan JAILBREAK
Ha moogaanin talooyinka maanta si aad si fudud uga fasaxdo bartaada iPhone-ka adigoon u baahnayn Jailbreak ama noocyo kale oo barnaamijyo ah.
VLC 360º wuxuu yimaadaa MacOS dhawaana waxaa lagu arki doonaa macruufka
Ragga ku jira VLC waxay ku biiraan shirkadda Giroptic si ay ugu keenaan 360 ciyaartoydooda 'macOS' isla markaana si dhakhso leh ugu dhajiyaan ciyaaryahanka iOS.
Khatar ku cusub asturnaantayada: sameecadaha dhagaha
Cilmi-baarayaashu waxay maareeyaan inay jabsadaan kombuyuutarka PC-ga si wada-hadalladayada loogu qabsado samaacadaha dhegaha, iyagoo u dhaqmaya sidii makarafoonno.
Sida looga saaro magacyada barnaamijyada guga kumbuyuutarka ee iOS 10.x bilaa JAILBREAK
Waxaan ku tusineynaa xeelad yar oo noo oggolaan doonta inaan ka saarno magaca codsiyada ku jira macruufka 10.x iyadoon xabsi la dhigin.
Pebble wuxuu cusbooneysiiyaa smartwaches iyada oo ku dareysa taageerada xusuusinta macruufka
Xusuusiyeyaasha IOS iyo hagaajinta akhriska garaaca wadnaha ayaa ugu dambeyntii la imanaya Pebble oo leh cusbooneysiin cusub.
I-CaseBoard wuxuu u iibiyaa Jimcaha Madow
Maalin kasta way kayartahay ilaa jimcaha caanka ah ee madow ay yimaadaan maalin walbana waxaa soo badanaya dukaamo ...
Farshaxanistaha Faransiiska ayaa u rogay Macs duug ah iyo jiirka Apple jardiinooyin
Farshaxaniste Faransiis ah ayaa qaatay qalab duug ah oo kombuyuutar Apple ah una beddelay dheriyaal si uu u abuuro beero aad u xiiso badan.
iPhone 8 oo leh muraayad muraayad ah si loogu oggolaado lacag-bixinta wireless, sida uu sheegayo falanqeeye
Warbixin cusub oo ka soo baxday falanqeeyaha ugu caansan dunida Apple waxay xaqiijineysaa in iPhone 8 uu yeelan doono kiis galaas ah iyo, tan ka sii muhiimsan, lacag la’aan wireless.
BeatsX-da cusub wuxuu imaan doonaa bartamaha Diseembar
Taariikhda la filayo inay bilaabato BeatsX cusub, samaacadaha dhegaha ee Beats, waa Diseembar 16.
Newton ilaa 50% usbuucaan
Newton waa mid ka mid ah macaamiisha ugu fiican ee loogu talagalay macruufka macruufka iyo macOS, dhowr maalmoodna waxaa loo dhimay 50% waxaadna ku raaxeysan kartaa dhimistaan ​​nolosha
Apple wuxuu rukhsad ka helayaa iPhone laab laaban oo leh shaashad jilicsan
Ma xasuusataa telefoonnadii u xirmay sida "cocha"? Hagaag, Apple wuxuu ikhtiyaar u yahay iPhone isku laaban oo ina xusuusinaya xoogaa ka mid ah boosteejooyinkaas.
Miyuu Jony Ive ka go'ay naqshadaynta wax soo saarka Apple?
Apple waxay soo saartay dhowr naqshadood oo aan u muuqan shirkad iyada oo kale ah. Suurtagal ma tahay in Jony Ive uusan eedeyn?
[Jimcaha Madow] Hel bilaash MacX Video Converter Pro, beddelaha fiidiyaha ugu fiican ee macOS
Gali si aad u hesho mid ka mid ah 1.000 nuqul oo maalinle ah oo bilaash ah! MacX Video Beddelaha waxaa laga heli karaa deeqdan Jimcaha Madow.
HiRise Duet, ku dalab iPhone iyo Apple Watch qaab ahaan
Saldhigga cusub ee HiRise Duet oo ka socda Twelve South wuxuu noo ogolaanayaa inaan ku dalacno iPhone-ka iyo Apple Watch hal xarig iyo qaab aad u qurux badan
IPhone 7 iyo iPhone 7 Plus kaydka si ay u hooseeyaan waqtiga Kirismaska
Aad ayey u yar tahay in Apple ay awoodi doonto inay ka jawaabto baahida weyn ee halkaas ka jiri doonta ...
Black Friday 2016, waxay bixisaa Nofeembar 21-24
Waxaan kuu keeneynaa dalabyada ugu fiican ee loogu talagalay Black Friday 2016. Ha moogaanin fursadda inaad ku iibsato qiimo dhimis muhiim ah!
PlayStation Vue hadda waxaa laga heli karaa Apple TV
Tani waxay u oggolaaneysaa dadka isticmaala PlayStation Vue inay daawadaan telefishanka tooska ah, iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee laga dalbado Apple TV.
Apple ayaa eeda dusha ka saareysa been abuurka dhibaatada ka heysata batteriga
Baarayaasha ayaa sheegaya in kororka tirada badan ee adeegsiga xeedhooyin aan rasmi ahayn ay sababayaan cilladaha batteriga.
iHome waxay soo bandhigeysaa saacaddeeda digniinta raadiyaha cusub oo ay ku soo oogeyso iPhone-kaaga iyo Apple Watch
iHome waxay soo bandhigtay saacaddeeda digniinta cusub oo leh saldhig isku dhafan oo isku dhafan oo loogu talagalay iPhone iyo Appel Watch, xiriirka Bluetooth iyo raadiyaha FM
IPhone 7 iyo 7 Plus Falanqaynta Kiiska: Qaabka Mise Difaaca?
Markaad dooraneyso kiis iPhone-keena waxaa jira arrimo badan oo lagu xisaabtamayo. Maanta waxaan falanqeyneynaa laba qalab oo cusub si loo ilaaliyo terminaalka.
Waxaan eegeynaa buugga cusub ee Apple € 200
Sidaad sifiican u ogtahay, Apple waxay dhawaan soo bandhigtay buug ay kujiraan sawiro cajiib ah oo lagu daabacay tayada ugu sareysa, ee ...
Apple waxay dooneysaa inay xakameyso cudurka Parkinson iyada oo loo marayo iPhone iyo Apple Watch
Apple waxay baareysaa in IPhone iyo Apple Watch ay "si sir ah ula socon karaan xogta" bukaanka ...
Sida loo kordhiyo kalsoonida kormeeraha garaaca wadnaha ee Apple Watch
Miyaad u maleyneysaa in qalabka wadnaha ee Apple Watch-kaaga uu yahay mid aan la isku halleyn karin? Halkan waxaan ku siineynaa dhowr talooyin si aan kuugu siino natiijooyin dhab ah oo dhab ah.
Qiimo dhimis ayaa bilaabmaysa: iPhone 6s ayaa laga dhimay Fnac's Pre-Black Friday
Jimcaha kahor-Madow wuxuu soo bandhigayaa inuu iibsado iPhone, Apple Watch, iPad PRO ama Mac kasta oo qiimo dhimis gaaraya ilaa 20%, miyaad tabaysaa?
Cayayaashu waxay u oggolaaneysaa helitaanka sawirrada iPhone xitaa haddii uu xiran yahay
Cilad cusub ayaa soo baxday oo u oggolaanaysa helitaanka sawir kasta oo iPhone-keena ah xitaa haddii aan ku ilaalinayno erey sir ah ama Taabasho Taabasho ah.
Apple waxay ka codsaneysaa Foxconn inay xisaabiso waxa ay ku kacayso soo saaristeeda Mareykanka
Foxconn waxay darsaysaa in ay macquul tahay iyo inkale in wax soo saarka iPhone-ka la keeno Maraykanka, hadii ay dhacdo in Donald Trump uu raaco hanjabaadiisa.
Kaamiradda iPhone 8 waxay lahaan doontaa xasiliyaha laba-jibbaaranaha indhaha
IPhone 8 Plus wuxuu lahaan lahaa xasiliyaha laba-jibbaaranaha indhaha kamaraddiisa, si ka duwan iPhone 7 Plus oo kaliya ay ku jirto mid ka mid ah muraayadaha indhaha.
Sida loogu daro xaalad deg deg ah habka 'Do not Disturb'
Habka Rabshaddu ha fiicnaato, laakiin ka waran haddii aan dooneyno inuu taleefan had iyo jeer garaaco? Waxaan ku dari karnaa xaalad deg-deg ah marka laga reebo.
Sida laga soo xigtay KGI, Apple waxay soo saari doontaa iPhone 8 oo leh shaashadda 5.2-inch ee OLED; mid ka mid ah 4.7 iyo mid kale oo ah 5.5 oo leh LCD
Sida laga soo xigtay KGI, sanadka soo socda waxaan arki doonaa iPhone 8 oo dhan oo hilib ah-kaas oo yeelan doona shaashad firfircoon 5.2-inch OLED.
AirPods ayaa suuqa soo gali doona bisha Nofeembar 30 sida laga soo xigtay Fnac France
Fnac France waxay ku daabacdaa bakhaarkeeda internetka qaddarinta boos celinta cusub ee AirPods waxayna dhigeysaa Nofeembar 30 sida maalinta loo soo daabuli doono.
Dib u eegista afhayeenka ZIPP Mini Copenhagen
Hadalka ZIPP Mini Copenhagen wuxuu leeyahay tayo cod aad u wanaagsan iyo naqshad aad u taxaddar badan. Waxay bixisaa isku xirnaanta iyada oo loo marayo Bluetooh, Wifi, AirPlay, Spotify iyo in ka badan!
Taariikhda la sii daayay ee cusub ee loo yaqaan 'AirPods': Christmas
Xanta ku saabsan taariikhda la siidaayo ee AirPods heshiis kuma jiraan. Hadda waxaa la rumeysan yahay inay heli doonaan maalinta Kirismaska.
Dhibaatooyinka kaydka shaashadda OLED ee iPhone-ka cusub ee 2017
Sida laga soo xigtay warbixin cusub oo Bloomberg ah oo ku saabsan arrintan, afarta ugu sarreysa ee iibiya guddiga OLED ayaa lagu yaqaanay inay ...
Waxaan falanqeyneynaa WALTR2, dirnaa oo helnaa dhammaan noocyada feylasha ee udhaxeeya Mac-gaaga iyo iPhone-kaaga
WALTR 2, daabacaadda labaad ee mid ka mid ah aaladaha wareejinta faylalka ugu caansan ee u dhexeeya macruufka iyo Mac ee muuqaalka barnaamijka.
Tani waa sida naqshadeeyayaasha istuudiyaha Apple u abuuraan noocyo [Video]
Marabtaa inaad aragto sida naqshadeeyayaashu ugu soo bandhigaan istuudiyaha Apple? Qoraalkan waxaad ku sameyn kartaa mahadsanid fiidiyoow.
Silsiladda alaabada ayaa leh wax soo saarka Apple ee Mareykanka waa wax aan macquul aheyn
Marka loo eego silsiladda Apple ay soo saarto, fikradda Donand Trump ee ah in wax soo saarka tufaaxa laga sameeyo Mareykanka gudihiisa ma ahan mid dhaqan galaya.
Cusbooneysiin muhiim ah oo WhatsApp ah: wicitaanada fiidiyowga ayaa hadda loo heli karaa qof walba
Ma rabtaa inaad isku daydo wicitaanada fiidiyowga ee WhatsApp? Hagaag, u orod App Store oo cusboonaysii! Hadda waxaa laga heli karaa adduunka oo dhan!
Shaashadda OLED iyo kamaradda laba-geesoodka ah waxay gaar u noqon doontaa 8-inji iPhone 5.5 ah
Warka xun ee loogu talagalay kuwa doorbidaya iPhone-ka yar: waxay umuuqataa in shaashadda OLED laga heli doono oo keliya iPhone-ka 5.5-inji ah.
Apple waxay bilaabi doontaa tijaabinta muraayadaha dhabta ah ee Augmented
Apple waxay bilaabi doontaa tijaabooyinka muraayadaha dhabta ah ee la kordhiyay, oo la mid ah muraayadda Google ee Google ka tagtay
Cusub Beats Solo3 Wireless wuxuu na siinayaa 40 saacadood oo ismaamul ah
Apple waxay soo saartay mashiinada xayeysiinta si ay ugu dhawaaqdo Beats Solo 3 Wireless, oo bixisa 40 saacadood.
Patent-ka Apple waxay soo jeedinayaan inaad ka fekereyso iPod-ka mar labaad
Toddobaadkii hore, Xafiiska Patent-ka iyo Astaanta Ganacsiga ee Mareykanka ayaa daabacay laba ka mid ah ganacsiyada ugu dambeeyay ...
IPhone 7-kan iyo kiiskiisa ayaa ka badbaaday dayrtii 155m (video)
Gali oo waxaad arki doontaa tijaabada ugu daran ee iPhone 7 uu wajihi karo: ugu yaraan 155m! Dabcan, khiyaamo.
Shiinaha ayaa sheegay in iibka taleefannada iPhone-ka uu hoos u dhici doono haddii Trump uu ka dhabeeyo ballanqaadkiisa
Shiinaha ayaa sheegay in iibinta taleefanka iphone ay dhibaatoon doonto hadii madaxweynaha la doortay Donald Trump uu fuliyo balanqaadyadiisii ​​ololaha.
Antivirus ee iPhone, waxaan falanqeyneynaa haddii ay tahay khuraafaad ama xaqiiqo
Waxaan dooneynaa inaan falanqeyno aragtida antivirus ee iPhone, intee le'eg khuraafaadka iyo xaqiiqda ayaa ah sheegashada ah in iPhone uusan u baahnayn nabadgelyo.
Sidee Xaqiijinta Laba-Talaabo ah ee WhatsApp u shaqaysaa
WhatsApp waxay tijaabineysaa nidaam xaqiijin ah oo laba-talaabo ah oo ka fog hagaajinta amniga adeegga farriintiisa
IPhone-kaagu ma damiyaa markuu wali leeyahay awood batteri? Halkan xalka
In Actualidad iPhone waxaan ku baraynaa inaad xalliso qaladka ka dhigaya iPhone inuu damiyo marka uu wali leeyahay batteriga sida ku cad tilmaame.
AirPods ayaa suuqa soo gali doona bisha Diseembar laakiin tiro yar
Taariikhda la heli karo ee AirPod-yada cusub waxay umuuqataa inay dib udhacayso ilaa dhamaadka Diseembar, sida lagu sheegay warbixintii ugu dambeysay ee Barclays.
Bandhigga Japan wuxuu u samayn karaa shaashadda OLED shaashadda Apple, iyadoo gacan ka helaysa dawladda Japan
Dhammaan xanta waxay xaqiijineysaa in iPhone ee 2017 uu yeelan doono shaashadda OLED. Waxa aan la ogeyn ayaa ah cidda siin doonta iyaga, iyo Muuqaalka Japan ayaa noqon kara mid ka mid ah.
Fiidiyow toos ah ayaa goor dhow soo galaya barta Instagram
Instagram ayaa hadda bilaabaysa muuqaal toos ah, muuqaal cusub oo loogu magac daray Live oo agaasimaheeda, Kevin Systrom uu dhawaan shaaciyay
Waxay ku eedeynayaan Spotify inuu ka tagayo qeybaha kaydinta aan la isticmaali karin sababo la xiriira qorista xogta xad-dhaafka ah
Barnaamijka desktop-ka ee Spotify ayaa lagu eedeeyay inuu si xad dhaaf ah u rariyay kumbuyuutarrada adeegsadayaasha iyaga oo xog badan ku qoraya.
Apple wuxuu bilaabayaa laba iPhone 5-inch iyo 5.8-inch iphone-ka sanadka 2017, sida laga soo xigtay Barclays Research
Sida laga soo xigtay dhowr falanqeeye oo ka tirsan Barclays Research, Apple waxay kori doontaa iPhone-ka 2017 waxayna bilaabi doontaa laba ka mid ah 5 iyo 5.8 inji, labadaba bilaa biil.
Apple ayaa ku guuleysatay abaalmarinta Adeegga Macaamiisha Twitter Gold
Twitter-ka ayaa ku dhawaaqay natiijooyinka waxqabadkeedii ugu horreeyay ee #Awards, isaga oo Apple u magacaabay hoggaanka adeegga ee ...
Nintendo waxay ku cusbooneysiisaa barnaamijka Miitomo qolka sheekeysiga
Ragga ka socda Nintendo waxay cusbooneysiiyaan shabakadooda bulshada ee Miitomo iyagoo noo ogolaanaya inaan sameyno wada sheekeysi gaar ah oo aan u habeynno guud ahaan caalamka Miiskeena.
Ecobee 3 Lite, oo ay gaari karaan jeebado badan
Ecobee Inc., oo sameysay Wi-Fi heerkulbeegga casriga ah ee ugu horreeya, ayaa dhowaan shaacisay daah-furka Lite Ecobee3. Qalabka cusub ...
iXpand Flash Drive, USB-Hillaac sidaa darteed iPhone-kaaga waligiis booska kama dhamaan doono
Kaydinta iPhone-ka ama iPad-ka ayaa ka dhammaanaya oo kuma dari kartid sawirro badan, fiidiyowyo, ama filimaan? Xalka waxaa lagu magacaabaa iXpand Flash Drive.
AirPods waa la iibin karaa usbuuca soo socda
Ma waxaad rajeyneysaa inaad Apple ku dhawaaqdo helitaanka AirPods? Hagaag, xanta ayaa xaqiijineysa inay imaan doonaan sida ugu dhaqsiyaha badan usbuuca soo socda.
Codsiyada loogu talagalay Apple TV waxay horeyba u oggolaadeen wadaagista xiriiriyeyaasha iyo soo dejinta iPhone-ka
Hadda waxaa suurtagal ah in laga helo xiriiriyeyaasha codsiyada Apple TV shabakaddaada, oo laga soo dejiyo iphone-ka Apple TV-ga
Sida Loo Joojiyo Khayaamada Ku Saabsan Sawirrada Wadaagga ah ee iCloud iyo Jadwalka
Toddobaadyadii la soo dhaafay, dadka isticmaala iCloud waxay ogaadeen koror ku yimid xaddiga spam ay helaan. The…
Apple Pay waxay sii wadaa kobcitaankeeda waxayna noqoneysaa adeeggii shanaad ee lacag bixinta internetka
Apple Pay waxay sii waddaa koritaankeeda wanaagsan waxayna ka sarreysaa Google Wallet qiimeynta adeegyada lacag bixinta khadka tooska ah, iyadoo noqotay adeegga shanaad ee ugu isticmaalka badan.
Ireland waxay siin doontaa dagaal Maxkamada Yurub
Wasiirka Maaliyada ee Ireland Michael Noonan ayaa hogaaminaya dagaalka uu kula jiro Apple ee ku saabsan biilka cashuurta Arbacada soo socota ...
Ku xakamee noloshaada dhijitaalka ah AppleT-da cusub ee IFTTT
Barnaamijka caanka ah ee otomaatiga ah ee IFTTT ayaa dib loo cusbooneysiiyay iyadoo la beddelay qaababkeeda caanka ah ee loogu talagalay qaar ka mid ah tufaaxyada cusub ee fududeynaya qaabeynta barnaamijka.
Sonos waxay soo saareysaa subwoofer-ka wireless-ka ee cad
Nooca Sonos wuxuu na siiyaa kuhadlayaal wireless ah oo leh taxanahooda Play, ee midabada madow iyo caddaanka ah. Si kastaba ha noqotee, illaa iyo hadda, ...
Haddii qalabka wax lagu xiro ee loo yaqaan 'Bragi Dash headphones wireless' uu horey u ahaa baaritaan. Haddii ay jiraan sameecadaha dhagaha ee gudaha geli kara ...
Apple waxay rukhsad u siisay nidaam khariidaynta iPhone-ka oo ku saleysan Xaqiiqada Kobacsan
Waxay u muuqataa in Apple ay wali tijaabineyso xaqiiqda 'Augmented Reality', sida ku cad shati cusub oo loogu talagalay nidaamka khariidaynta ku saleysan AR-ka ee iPhone-ka.
Gmail ee macruufka waxaa lagu cusbooneysiiyaa iyadoo dib loo qaabeynayo isku xirkeeda iyo in lagu daro shaqooyin cusub
Google waxay cusbooneysiineysaa Gmail-ka ee iOS-ka oo noo ogolaanaya inaan joojino dirista emayllada sida ku dhacda xiriirka websaydhka ee adeegga caanka ah ee emaylka.
Codbaahiye! waxay kaa caawineysaa inaad xakameyso mugga AirPods-kaaga
Markii ugu horreysay ee Apple ay shaaciso dhagaha dhagaha wireless-ka ee AirPods ee iPhone 7 iyo iPhone 7 Plus, waa la helay received
Apple wuxuu ku badalayaa astaamaha caawinta nidaam cusub
Dhawaan, Apple waxay bedeshay nidaamkeeda caawimaad iyada oo loo marayo webka adeegsadayaasheeda. Hadda, mar dambe ma helno ...
Halkee laga helaa GIF-yada ugu wanaagsan ee lagu wadaago WhatsApp
Maaddaama aan haysanno mashiinka raadinta GIF, waxaan dooneynaa inaan ku tusino sida loo helo GIF-yada ugu wanaagsan ee lagula wadaago waxyaabahaan WhatsApp.
Sida loogu adeegsado Dhageysiga Tooska ah qalabka gargaarka maqalka
Ikhtiyaarrada ay Apple siiso dadka qaba nooc ka mid ah naafonimada aragga ama maqalka ayaa ah mid aan lasoo koobi karin, ma aha wax iska yimid ...
Netatmo Joogitaanka kamarada amniga ugu fiican ee iDevices
Netatmo Presence, kaamirada ugu fiican amniga ee iPhone-keena, si sahlan loo rakibo loona awoodo baaritaanka dadka, gawaarida iyo xayawaanka.
Dowladda Hindiya ayaa soo iibsatay tikniyoolajiyad loo adeegsado in lagu jabsado iphone-ka
Hindiya waxay dooneysaa inay hesho tikniyoolajiyadda ay soo saartay Cellebrite si ay u furto taleefanka iPhone-ka una noqoto "xarunta caalamiga ah" tan
Sidee looga soo ceshaa xogta tirtiray iCloud
iCloud wuxuu noo ogolaanayaa inaan ka soo ceshano xiriir kasta, kalandarka, kan ugu jecel ama faylka laga tirtiray iCloud muddo 30 maalmood ah. Waxaan sharaxeynaa sida loo sameeyo.
Samsung ayaa sii socota hoos u dhac, waxay dib u soo celin doonaan 2,8 milyan oo mashiinnada dharka lagu dhaqdo ah
Mashiinada dharka lagu dhaqo ee Samsung ayaa sidoo kale qarxaya, sababtaas awgeedna waxay ku baaqayaan in dib loo soo celiyo in ka badan 2,8 milyan oo mashiinnada dharka lagu dhaqo ah oo dhibaatadan cusubi saamaysay.
Steve Ballmer, Agaasimihii hore ee Microsoft, ayaa qirtay inuu qaldanaa markii uu dhaleeceeyay taleefanka Iphone
Sagaal sano kadib markii IPhone-ka la bilaabay, Steve Ballmer wuxuu qirey inuu ku qaldanaa inuu dhaleeceeyo nuuca ugu horeeya ee iPhone-ka.
Si joogto ah ugu tirtir koontadaada Facebook tababarkan
Waxyaabaha adag ayaa ah in la doorto in la tirtiro koontada, sidaa darteed waxaan kuu soo bandhigi doonaa talaabo talaabo ah sida si joogto ah looga tirtiro isticmaalahaaga Facebook.
Sida loo isticmaalo loona habeeyo Dock-ka ee watchOS 3.x
Miyaad ku isticmaashaa barnaamijyo badan Apple Watch-kaaga? Hadday sidaas tahay, waxaa habboon in la barto sida loo isticmaalo loona qaabeeyo Dock-ka ee watchOS 3.x.
Sidee loogu celiyaa saamaynta farriinta ee iOS 10
Iyadoo la cusbooneysiinayo ugu horreyntii ugu weyneyd ee iOS 10, 10.1, Apple waxay mar hore noo oggolaaneysaa inaan dib u soo celino saameynta farriimaha aan helno ama aan dirno.
Apple waxay haysaa 103% faaiidada suuqa mobilka adduunka
Apple waxay si xoogan u hogaamineysaa miiska macaashka ee suuqyada casriga ah ee adduunka, oo ka dhigan 103% ka mid ah.
Ciyaarta superhero-ka cusub ee loo yaqaan 'DC Legends' ayaa hadda laga heli karaa App Store
Warner Bros Interactive wuxuu bilaabayaa DC Legends, ciyaar istiraatiijiyadeed cusub oo aan kula tartami karno astaamaha astaanta isticmaalayaasha kale.
Kiisaska ugu fiican ee iPhone 7 iyo iPhone 7 Plus
Ma waxaad raadineysaa xulashooyin si aad u difaacdo iPhone-kaaga cusub ee aad iibsatay? Maqaalkani waxaan ka hadlaynaa kiisaska ugu fiican ee iPhone 7 iyo iPhone 7 Plus.
Plantronics waxay kubiirtay dagaalka fiilooyinka iyada oo ay la socoto BackBeat PRO 2
Plantronics waxay na siisaa samaacado dhegaha badan oo dhegaha badan leh oo leh qeexitaanno aad u horumarsan iyo qiimo jaban
Apple horeyba waxay udooratay horumariyeyaasha kasoo muuqan doona Planet of the Apps
Apple waxay durbaba dooraneysaa horumariyayaal si ay uga soo muuqdaan Planet of the Apps, oo ah tusmada lahaanshaha lahaanshaha oo hawada soo gali doonta laga bilaabo 2017.
Channel Channel, barnaamijka loogu talagalay dhammaan inta jecel cayaaraha
IOC waxay soo bandhigaysaa Channel-ka Olombikada, oo ah barnaamijka ugu fiican ee laga raaco isboorti kasta oo adduunka ah aaladaha moobilkeena.
Miyaynu soo galeynaa xilligii-PC-ga?: Waxaan horeyba ugu sii soconnay mobilada iyo kiniiniyada marka loo eego kumbuyuutarrada
Waxay ahayd Post-PC: sidii Steve Jobs u horumarsanaa, kiniiniyada iyo mobilada ayaa horeyba loo isticmaalay in ka badan kombuyuutarrada, ugu yaraan marka aan marinno shabakadda.
Apple Campus 2 ayaa ku dhow dhammaad
Dhismaha Apple Campus 2, oo noqon doona xarunta cusub ee balooggan, ayaa helay isbadalo waawayn oo dhamaad ku dhow.
Samsung iyo LG waxay u dagaallamaan inay sameeyaan shaashadda OLED ee iPhone 8
Haddii ugu dambayntii Apple ugu dambayntii doorto inay adeegsato shaashadda OLED ee iPhone 8, kuwan waxaa soo saari doona Samsung ama LG
AirPods waxay bilaabi doonaan kahor dhamaadka sanadka
In kasta oo ay jiraan warar xan ah oo ku saabsan dib udhaca illaa 2017, AirPods waa la iibin doonaa kahor dhamaadka sanadka, waqtiga Kirismaska.
Foxconn waxay ka shaqeyn kartaa lacag la'aanta wireless-ka 'iPhone 8'
Marka aynaan xitaa ka dhigin laba bilood iyada oo ay naga dhexeyso iPhone 7 iyo iPhone 7 Plus, qaar badan ayaa ...
Apple ayaa wali ah hogaamiyaha suuqa kiniiniga hoos u dhaca joogtada ah
Suuqa kiniiniyada ayaa ku jira hoos u dhac joogto ah, si kastaba ha noqotee, Apple waxay ilaalisaa hoggaanka waxayna xitaa kordhisaa fogaanta tartanka
Dock iyo fayl asalka madow on your iPhone oo aan JAILBREAK
Maanta waxaan kuu keenaynaa khiyaano fudud oo aad ku heli karto qaab mugdi ah oo ku saabsan iPhone-kaaga oo leh iOS 10 iyada oo aan loo baahnayn JAILBREAK
Elgato Eve Light Switch ayaa noo oggolaan doonta inaan ku xakameyno beddel kasta HomeKit
Ragga Elgato waxay bilaabeen Eve Light Switch, mid ka mid ah xulashooyinka ugu raqiisan ee si toos ah loogu xakameeyo furayaasha tooska ah ee iPhone-keena.
WiGig, mustaqbalka shabakadaha wireless?
Tikniyoolajiyadda WiGig waxay na siisaa xawaare isku xirnaan badan laakiin waxay leedahay xaddidaadyo muhiim ah oo u sababi kara inayna dhammeyn curdinta.
Inta badan dadka ay saameysay Samsung Galaxy Note 7 waxaa loo wareejinayaa iPhone
Falanqeeyayaasha shirkadda IDC waxay iftiiminayaan in sahaminta inbadan oo kamid ah dadka isticmaala Note 7 ay u wareegi doonaan iPhone kadib dhibaatooyinka qaraxyada.
Sida loo soo dejisto dhamaan fiidiyowyadaada kahor intaan Vine baabi'in
Waxaan kuu soo bandhigi doonaa qaabab aad ku soo dejiso fiidiyowyadaada Vine-ka ah ee macruufka iyo macOS sida ugu fudud uguna dhaqsaha badan.
Shumuri Slim Extra, oo ah kiiska ugu yar ee loogu talagalay iPhone-kaaga
Shumuri Slim Extra wuxuu ku faanaa inuu ilaaliyo iPhone-kaaga adoo kudaraya kaliya 0,35mm oo dhumucdiis ah, taasoo ka dhigaysa kiiskii ugu khafiifsanaa suuqa
Sida loo isticmaalo Scribble ee Apple Watch xitaa haddii uusan si rasmi ah ugu jirin Isbaanishka
watchOS 3 waxay la timid ikhtiyaar cusub oo la yiraahdo Scribble oo noo ogolaanaya inaan farta ku qorno. Halkan waxaan ku sharaxeynaa sida loogu isticmaalo Isbaanishka hada.
Twitter wuxuu ku dhawaaqay in Vine la xiri doono
Si loo yareeyo kharashka, Twitter, marka lagu daro joojinta 9% ee shaqaalaheeda, waxay sidoo kale go'aansatay in la xiro adeegga fiidiyowga gaaban ee Vine.
Sida loo soo dejiyo maktabadayada muusikada oo dhan iPhone
Miyaad ka tirsan tahay Apple Music mase garanaysaa sida loo guuriyo maktabaddaada muusikada oo dhan iPhone-kaaga Qodobkaan waxaan ku tusaynaa.
Apple waxay bilaabi doontaa hage TV oo loogu talagalay Apple TV oo leh macluumaad ku saabsan dhammaan barnaamijyadeenna
Warbixin ayaa soo shaac baxday taas oo Apple ku diyaarin lahayd barnaamij hagitaan TV ah oo loogu talagalay Apple TV iyo waxyaabaha ku jira Netflix laga tagi doono.
Podcast 8 × 08: «Mar labaad waad salaaman tahay», falanqaynta hordhaca ah
Dhacdada berri Khamiista ee Mac-yada cusubi iman doonaan iyo warar kale oo ka socda adduunka teknolojiyadda sida natiijooyinka Apple oo la falanqeynayo
Apple waxay sii wadi doontaa inay mudnaanta koowaad siiso Sirdoonka Artifishalka
Sida ay u muuqato, Apple wuxuu sii wadi doonaa inuu asturnaanta ka dhigo mid ka mid ah qodobbada muhiimka ah, xitaa haddii taasi ay hoos u dhigeyso sirdoonkeeda farsamada xoogaa ah.
Saadaashu waxay muujinayaan in Apple ay soo bandhigi doonto rubuc afaraad 9 bilood kadib
Sida laga soo xigtay falanqeeyayaasha, Apple ayaa durbadiiba bilaabay inuu arko iftiinka dhamaadka tunnelka: saadaashu waxay hubineysaa in waqtiyada wanaagsan ay ku soo laaban doonaan Kirismaska.
Adeegyada Apple ayaa kordhay 24% intii lagu jiray Q4
Si ka duwan hoos u dhaca iibka, adeegyada Apple ayaa kori lahaa 24% inta lagu gudajiray Q4 ee 2016 iyadoo adeegyo ay ka mid yihiin Apple Music iyo Apple Pay.
Apple.com: Labaatan sano oo Shabakad ah muddo 3-Daqiiqo ah oo ka-gaabis ah
Ma jeceshahay inaad aragto sida websaydhka Apple isu beddelay muddo 20 sano ah? Halkaan waxaan kuugu soo bandhigeynaa 3 daqiiqo oo fiidiyoow ah oo waqti lumis ah oo ku tusaya.
Shirkadda Twitter ayaa qorsheyneysa inay shaqada ka joojiso boqolaal shaqaale ah toddobaadkan
Twitter-ka wali dhibaato ayaa ku jirta, waana wax ka dhex muuqan doona toddobaadkan qaababka ugu xun, iyadoo la fasaxayo boqolaal shaqaalaha shirkadda ah.
Apple waxay tixgelisay inay bilawdo iMessage ee Android xitaa waxay sameysay jees jees
IMessage for Android weligeed ma imaan doontaa? Sida laga soo xigtay macluumaad cusub, Apple ayaa horeyba u qaadatay suurtagalnimada si dhab ah. Markuu wabiga dhawaaqo ...
PowerBeats3 Wireless hadda waa la heli karaa si looga iibsado Apple Store khadka tooska ah
Foornooyinka cusub ee PowerBeats3 wireless leh W1 chip ayaa hadda laga heli karaa Apple Store khadka tooska ah, kahor EarPod-yada laftooda.
Pokémon Go wuxuu yeelan doonaa waxyaabo gaar ah oo Halloween ah
Ragga ku jira Niantic waxay ka faa'iideystaan ​​maalmaha horseedka u ah Halloween si ay u soo bandhigaan waxyaabo gaar ah oo Halloween ah oo ku saabsan Pokémon GO.
Sida loo rakibo WhatsApp kale iPhone-kaaga adigoon Jailbreak
Hadda waa suurtagal in la helo laba koonto oo WhatsApp ah oo lagu rakibay isla iPhone-ka isla markaana muhiim maahan in Jailbreak la sameeyo ama aad yeelato koonto sameeysa
Weerarkii internetka ee jimcihii wuxuu muujinayaa muhiimadda HomeKit
Weerarkii DDoS ee jimcihii waxaa lagu soo bandhigay Internetka Waxyaabaha, aaladaha ku xiran ee leh amniga aad u liita.
Sida loo yareeyo isticmaalka xogta barnaamijka Instagram
Maanta waxaan kuu sheegaynaa sida loo yareeyo isticmaalka xogta aad u sarreeya oo Instagram ay sameyso si taraafikadaadu kuu soo gaadho illaa dhammaadka bisha
Sida loo maareeyo muusikada la soo dejiyey ee ku jira iPhone-kaaga
IOS 10 waxay na siisaa fursado dhowr ah oo aan ku maareyn karno muusikada aan ku soo dejisanay qalabka, gacan ama si toos ah.
Apple wuxuu la shaqeeyaa kuwa wax dhisa si ay u kexeeyaan korsashada HomeKit
Laga soo bilaabo waxa ay u muuqato, kuwa Cupertino waxay durbaba ka fekerayaan guriga mustaqbalka iyo Apple waxay horeyba ula hadlaysaa shirkadaha dhismaha si kor loogu qaado ansaxinta HomeKit
Sida loo soo diro GIF-yada WhatsApp hadda xitaa haddii ikhtiyaarka aan lagu kicin
WhatsApp wuxuu horeyba noo ogolaaday inaan aragno GIF-yada, laakiin ma diri karno maxaa yeelay howshu kama hawlgasho sideedaba. Halkan waxaan ku tusaynaa sida loo sameeyo hadda.
Sida loo beddelo midabka taleefankaaga iPhone 6s si uu u noqdo mid cad
Waxaan dooneynaa inaan ku tusino sida iPhone 6s uu ugu muuqan doono midab jilicsan, laakiin markan midabka la xushay waa cadaan, sanadle xiiso leh si loo cusbooneysiiyo muuqaalkiisa
WhatsApp waxaa lagu cusbooneysiiyaa tifaftirka sawirka iyo isbeddelada naqshadeynta
Nidaam aad u xiiso badan oo tafatirka sawirada ah ayaa lagu soo kordhiyay WhatsApp, sidoo kale waxaa isbadal lagu sameeyay qaabeynta, aadna ugu badan qaabka Facebook Messenger.
Ma qiyaasi kartaa dheri tufaax ah? Way jirtaa, laakiin iyaga kaliya
Apple shatiyadeeda waxyaabo badan iyo inbadan oo kamida umuuqda inaysan macno badan samaynayn. Waa waxa aan ka fikiray rukhsaddii ugu dambaysay, meesha aad ku arkayso weel ubax ...
Tim Cook oo ah Madaxweyne kuxigeenka Mareykanka? Way dhici kartay, sida uu sheegayo WikiLeaks
Musharaxa madaxweynaha Hillary Clinton waxay qaddartay suurtagalnimada in Tim Cook, oo ah agaasimaha guud ee Apple, uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka.
EPGL horeyba waxay ugu shaqeysaa barnaamijyada macruufka ee la jaan qaada muraayadaha indhaha
Ma qiyaasi kartaa xirashada muraayadaha indhaha? Hagaag, EPGL waxay durbaba ka shaqeyneysaa codsiyo loogu talagalay macruufka aan ku isticmaali karno noocyada muraayadaha indhaha.
Noloshu way ka fiican tahay bilaa xadhig, dhawaaqii ugu dambeeyay ee Beats ee daaha ka qaadaya dhagaha cusub
Ogeysiiskii ugu dambeeyay ee ka soo baxa Beats wuxuu inoo sheegayaa waxa aan ka faa'iideysanayno haddii aynaan adeegsan fiilooyinka, taas oo u muuqata u ekaanta iPhone 7.
Kiiskan loogu talagalay iPhone-kaaga 7 wuxuu isku darayaa shaashadda khad elektaroonig ah
Daboolka Inkcase ayaa na siinaya, marka lagu daro ilaalinta aaladdayada, shaashadda khad elektarooniga ah si loogu akhriyo buugaagta aannu ugu jecel nahay
Sidee Apple uga saari kartaa taleefannada iphone taleefannadeeda fiilooyinka amniga
Apple waxay hubisay in aalad kasta oo dukaamadeeda uga tagta iyadoon la fasaxin ay gebi ahaanba naafo tahay
Apple wuxuu bilaabay beta-kii afraad ee iOS 10.1
Ragga ka socda Cupertino waxay hadda sii daayeen beta cusub oo ah iOS 10.1, kii afraadna kuwa wax dhisaya iyo kan saddexaad ee isticmaalayaasha beta bulshada.
Dib u eegis iyo bakhtiyaa-nasiibka Just Mobile TENC AutoHeal kiiska
Keliya Mobile-ka ayaa na siiya kiis u adkaysanaya gardarrada dibedda ka socota iyo kan iskiis isu bogsada, adigana adigaa iska leh adoo ka qaybgalaya tartankan.
Sida loo Dhoofinayo Calaamadaha Safari ee ka imanaya iPhone illaa Mac / PC
Maanta Actualidad iPhone waxaan rabnaa inaan ku barinno sida loo dhoofiyo calaamadaha calaamadaha iPhone ama iPad loona aado PC / Mac si fudud.
Sida loo joojiyo helitaanka macruufka betas
Waxaan ku tusineynaa sida aad u joojin karto helitaanka betasyada kala duwan ee Apple u soo bandhigto cusbooneysiin kasta oo cusub oo iOS ah
Ku hagaaji booskaaga iPhone-ka talooyinkan fudud
Waxaan kuu soo qaadaneynaa qaar ka mid ah tabaha si aan u hagaajino kaydinta qalabkeena, sidaas awgeedna ka dhigno inta ugu badan booska iPhone-ka.
Barnaamijyada ugu fiican ee sawir qaadista ah ee loogu talagalay iPhone-kaaga cusub 7
Waxaan kuu soo qaadaneynaa xul ah waxa aan u aragno codsiyada sawir qaadista ugu fiican ee iPhone kasta ay ahayd inuu rakibo.
Sida loo "deauthorize" kombuyuutar / Mac la xiriira ID Apple ka iTunes
Waxaan ku baraynaa sida loo "deauthorize" PC / Mac la xiriira aqoonsiga Apple ee laga helo iTunes, sida ugu fudud uguna dhaqsaha badan, oo leh casharrada caadiga ah.
Instagram waxay timaadaa Windows 10 laakiin wali ma hayno barnaamij rasmi ah iPad
Ragga ka socda Instagram-ka ayaa la yaabay markay bilaabeen nooca rasmiga ah ee barnaamijka ee Windows 10 iyadoo la adeegsanayo bilowga barnaamijka iPad-ka.
Apple waxay bilaabeysaa inay fiilooyinka amniga ka saarto iphone-keeda
Apple ayaa ka saaraysa fiilooyinka amniga ee iphone-ka la dul dhigay miisaska lagu soo bandhigo Bakhaarada ay ku kaydsantahay Apple si ay dadka isticmaala ugu raaxaystaan.
Apple waxay bilaabaysaa inay iibiso iPhone 7 bilaash ah Maraykanka
IPhone-ka cusub ee iPhone 7 iyo iPhone 7 Plus ayaa suuqa ku jiray muddo bil ka badan, laakiin markii ay timaado ...
ImgPlay - GIF Kan sameeyey oo leh Sawirro iyo Fiidiyowyo Bilaash ah Waqti Xaddidan
Mar labaad waxaan ka hadlaynaa codsi hadda diyaar ah oo bilaash ah oo laga soo dejisan karo, codsi ...
Apple wuxuu rukhsad u leeyahay dareeraha iftiinka jawiga ee ku dhexjira shaashadda iPhone
Hantidhowrka cusub wuxuu sharxayaa aaladaha elektarooniga ah oo leh dareemayaal iftiin leh oo lagu dhex daray shaashadda telefishinnada mustaqbalka ee Apple.
Falanqaynta IPhone 7 Plus Jet Black, waa iPhone-ka ugufiican taariikhda [Videoreview]
Waxaan falanqeyneynaa iPhone 7 Plus Jet Black, mid ka mid ah kuwa loogu baahida badan yahay midabkiisa dhalaalaya madow iyo kamaraddiisa cusub ee laba-geesoodka ah. Dhammaan wararka ku jira sawirro iyo muuqaal.
Sida loo rakibo Waqtiga saanadda Apple TV 4
Markan waxaan kuu sheegeynaa sida loo rakibo waqtiga loo yaqaan 'Popcorn Time' ee loo yaqaan 'Apple TV' oo ah jiilka afraad ee Apple TV iyada oo aan loo baahnayn in la xiro
Ku cusbooneysii Apple Watch-kaaga astaamahan cusub ee watchOS 3 (II)
Iyada oo la adeegsanayo shaqooyinka iyo astaamaha cusub ee ay bixiso watchOS 3, jiilkaaga koowaad Apple Watch waxba uma soo diri doono kuwa cusub
Wozniak waxay leedahay Apple waxay ku saxsanayd inay ka saarto 3.5mm Jack On iPhone 7
Haddii aad ka mid tahay kuwa aan aqbali doonin si kasta oo Apple u baabi'isay dekedda dhagaha ee 3.5mm, Steve Wozniak kuguma raacsani.
Mophie wuxuu bilaabayaa kiisas qaabaysan oo loogu talagalay iPhone 7 oo leh boorso iyo batari
Mophie waxay soo saartay khadkeeda Hold Force kiisaska, kiisaska qaabdhismeedka ah ee kuu oggolaanaya inaad ku darto kaararka ama batteriga loo heli karo iPhone 7 iyo iPhone 7 Plus.
Sida loo beddelo qaabka khariidadaha ee Apple Watch-kaaga
Maanta waxaan ka hadli doonnaa codsiyada ku jira watchOS 3 Springboard iyo sida ugu dhaqsaha badan looga abaabulo aaladdayada.
Ku cusbooneysii Apple Watch-kaaga astaamahan cusub ee watchOS 3 (I)
Facebook wuxuu bilaabay codsi madax-bannaan oo lagu maareeyo dhacdooyinka
Facebook wuxuu soo bandhigayaa "Dhacdooyinka Facebook", oo ah codsi cusub oo ka socda shirkadda Mark Zuckerberg si uu si fudud ula kulmo asxaabta.
Sida loo isticmaalo astaamaha muusikada cusub ee iOS 10
Barnaamijka Muusigga oo ay weheliso Apple Music ayaa gebi ahaanba dib loogu qaabeeyey macruufka 10. Maanta waxaan kuu sheegaynaa sida loo isticmaalo astaamaheeda cusub
Rasmiga rasmiga ah ee barnaamijka 'Big Brother' ayaa ku soo laabtay si loo buuxiyo bandhigga dhabta ah
Soo ogow sida rasmiga ah ee codsiga Big Brother aad ula socon karto wax kasta oo ka dhaca guriga adiga oo aan u baahnayn telefishan
Sida loo raadsado inta udhaxeysa Safari Tabs ee iOS 10
Haddii aan caadaysannay Safari waxay u badan tahay in in ka badan hal munaasabadood aad xiisaynayso inaad ka dhex samayso raadinta meelaha furan.
Sida loo diro qoraalo ku saabsan tafatirka iskaashiga ee iOS 10
IOS 10 waxaa ku jira sheeko cusub oo noo oggolaaneysa inaan u dirno qoraalo tafatirka iskaashiga ah. Qodobkaan waxaan ku bari doonaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato.
Hawlaha aan luminay imaatinka macruufka 10
Marna roob kuma da'o qof walba sida uu u jecel yahay, waana sababta qaar ka mid ah astaamahan ay u badan tahay in laga qafaashay nidaamka qalliinka illaa laga xumaado.
Sida had iyo jeer loo ogaado meesha aan dhigano gaariga mahadsanidiisa iPhone
Ha seegin casharradan ku saabsan sida loo kiciyo ama loo joojiyo shaqada "show parked parking" ee taleefankayaga iPhone si otomaatig ah.
Sida loo Qariyo iOS 10 Sawirro Roll Camera oo aan Waxba ku rakibin
Miyaad ku haysataa sawirro iPhone-kaaga oo aadan doonaynin indho fiiqan inay arkaan? Xaqiiqdii haa. Halkan waxaan ku bari doonaa sida loo qariyo sawirada iOS 10.
Isticmaalayaashu waxay ka cabanayaan in taleefannadooda cusub ee iPhone 7 ay la socdaan Furitaanka Qufulka
Maalmahan, iibsadayaasha iPhone 7 ama iPhone 6s cusub waxay arkayaan qalabkooda cusub ee ay soo iibsadeen oo la yimid qufulka firfircoonida.
IPhone wuxuu iibin doonaa si kafiican sidii lafilaayay ciidaha kirismaska ​​sida ku xusan silsiladda saadka
Marka loo eego silsiladda alaabada, iibka iPhone-ka ayaa ka badnaan doona saadaasha oo dhan wuxuuna u iibin doonaa si ka wanaagsan sidii Wall Street saadaaliyay.
Shazam wuxuu cusbooneysiiyaa oo ku darayaa codsi "shazamear" Fariimaha
Suurtagalnimada in Shazam si toos ah looga sameeyo codsiga farriimaha waa hal sabab oo kale oo la isugu dayo beddelkan fariimaha degdegga ah.
Isbedelo badan iyo mustaqbal ifaya: shan sano kadib Shaqooyin
Shan sano ayaa ka soo wareegtay markii ay astaantii naga tagtay, qaar badanina waxay ahaayeen isbeddelada Apple iyo Steve Jobs kaga duwan shirkadda ay hadda tahay.
Apple wuxuu sii daayaa macruufka 10.1 Beta 2 ee loogu talagalay Soo-saareyaasha
Apple ayaa soo saartay macruuf cusub 10.1 Beta kaas oo keena cilladaha cilladaha iyo saameynta Bokeh ee iPhone 7 Plus sida muujinta
Tijaabadani waxay muujineysaa in safayrkii loo adeegsaday iPhone-ka uusan ka yareynin tan saacadaha
Tijaabad ayaa muujisay in safayrka loo isticmaalay muraayadaha indhaha iyo Touch ID ee iPhone-ka uusan ka yareyn adkaysiga safayryada kale ee la isticmaalo, sida kan saacadaha.
Xarunta xogta Apple ee ku taal Danmark waxay noqoneysaa maalgashi shisheeye ugu balaaran taariikhda wadanka
Xarunta xogta Apple ee ku taal Danmark waxay noqon doontaa maalgashiga shisheeye ee ugu weyn dalkaas, iyada oo laga taageerayo iTunes, App Store, iMessage, Apple Maps iyo Siri.
Microsoft wuxuu ka tagayaa "Apple Watch dilaa", Microsoft Band 2
Microsoft waxay ka tagaysaa kumbuyuutarradeeda Microsoft Band 2 iyadoon xitaa u oggolaan inay gaarto sanad nololeed, taasoo ka dhigeysa in isticmaaleyaasheeda ay jiifaan jiinka.
Miyaynu ku arki doonnaa iPhone 8?
Xanta ayaa qaab usameynaysa: Apple waxay xiratay aaladda sawirka faraha ee ka shaqeyn doonta shaashadda, waana wax aan arki karno 2017.
Apple ayaa bilaabi kara iPad Pro "mini" oo cusbooneysiin kara qaabka 12,9.
Xanta ugu dambeysay waxay muujineysaa in Apple ay bilaabi doonto seddex nooc oo iPad Pro cusub sanadka soo socda, oo ay ku jiraan nooc mini iyo 10.1 inji
Beddel asalka iPhone 7-kaaga si aad u aragto qalabka ku dhex jira
La yaab saaxiibbadaada taariikhdan cusub ee cusub ee iPhone 7 oo aad ku dhex arki doontid qalabka ku dhex jira, waxay u muuqan doontaa hufnaan.
Ma ogtahay in iPhone uu diiwaan galiyo dhaq dhaqaaq kasta oo aad sameyso? Sida looga fogaado
Waxaan ku tusineynaa sida loo joojiyo raadinta goobta joogtada ah ee iPhone-kaaga, astaamo aan faa'iido lahayn oo cuna batari badan.
Fiidiyowgan 14-ka labaad ahna wuxuu ahaa kii bilaabay Hissgate
Sida sanad walba, iPhone 7 wuxuu la yimid cusub -google oo markan helaya magaca Hissgate. Dhammaantood waxay ku bilaabmeen fiidiyowgan 14 labaad.
Sida loo arko ereyada heesaha ee iOS 10
Apple Music waxay u ogolaaneysaa IOS 10 inay ka daawato ereyada heesaha arjiga laftiisa, iyadoon loo isticmaalin codsiyada dhinac saddexaad.
Sida loo xaliyo dhibaatooyinka isku xirnaanta Bluetooth ee iOS 10
Maanta oo Axad ah waxaan rabnaa inaan ku tusno sida loo xalliyo qaar ka mid ah dhibaatooyinka isku xirnaanta Bluetooth ee la yimid iOS 10 illaa iPhone.
Ma ka daashay shaashadda jaallaha ah? Sida loo waafajiyo midabka shaashadda iPhone
Waxaan ku bari doonnaa sida loo beddelo culeyska shaashadda qalab kasta oo iOS ah, si aad u ilowdo midabka hurdiga ah ee iPhone 7.
Fuze, kiiska batteriga iyo qalabka dhegaha ee iPhone 7
Fuze waxay ku siineysaa batari ku daraya xiriiriye jaak ah iPhone 7 ama 7 Plus, sidoo kale waxaa ku jira batteri si aad dib ugu buuxiso.
Sida looga baxo liiska boostada ee boostada leh iOS 10
Casharkaan fudud waxaan kuugu sheegeynaa sida loo adeegsado howsha cusub ee "Unsubscribe" ee iOS 10 si aad uga saarto liiska liiska dirista culus.
Apple waxay kula gorgortameysaa Sharp bixinta qalabka OLED ee jiilka soo socda ee iPhone
Apple waxay kala xaajooneysaa Sharp inay soo saarto bandhigyada OLED ee 2017. Bandhigyadan waxay bixiyaan isbarbardhig wanaagsan iyo adeegsiga batteriga oo hooseeya.
Waxaan kuu keenaynaa 6 wijito si aad uga faa iideysato macruufka 10
Waxaan kuu soo qaadan doonnaa wax aan ka yarayn siddeed wijetarro aad u qurux badan oo noloshaada kuu fududeyn doona mahadnaqa macruufka 10.
Sida loo habeeyo badhanka guriga ee iPhone 7 iyo iPhone 7 Plus
Ugu danbeyn! Apple horey ayey badh uga saartay badhanka guriga iPhone 7, laakiin waxay ubaahantahay in lahabeeyo. Ma garanaysid sida? Waan kuu sharraxeynaa.
Dhoobada ama dhalada? Dhig khamaaristaada iPhone-ka soo socda
Hal sano kadib soo bandhigida iPhone 8 oo u dabaaldegi doona sanad-guurada 10aad ee casriga, xanta ku saabsan naqshadeynta ayaa bilaabmaya
WiFox waa barnaamij muhiim u ah dadka safarka ah ee noo ogolaanaya inaan ku xirno shabakadaha kala duwan ee WiFi ee garoomada diyaaradaha adduunka oo dhan
Apple Music ayaa hogaamineysa dhanka qanacsanaanta macaamiisha marka la barbardhigo inta hartay ee baahinta adeegyada muusikada sida Spotify
Qarowga Samsung ayaa sii socda: Galaxy Note 7 ee "caymiska" ayaa dab ka kacay Shiinaha
Adeegsade Shiine ah ayaa sheeganaya in taleefonkiisa cusub ee loo yaqaan 'Galaxy Note 7' uu isna dab qabsaday. Muxuu Samsung hadda sameyn doonaa?
Podcast 8 × 04: Durbaannada, kamaradda iyo wararka kale ee usbuuca
New iPhone News Podcast oo aan uga hadlayno batariga taleefanka cusub ee iPhone 7 iyo 7 Plus, haddii uu la kulmo waxyaabaha laga filayo, iyo wararka kale
Apple waxay kaydisaa xogta xiriiriyahaaga iMessage
Apple waxay ku keydisaa metadata wada sheekeysiga iMessage server-keeda, sidaas darteed waxaa looga baahan karaa inay siiso iyaga amar maxkamadeed
Kuwani waa sababaha ay tahay inaadan iibsan iPhone 7 Jet Black
Waxaan soo bandhigi doonnaa sababo taxane ah oo ay tahay inaanan iibsan iPhone 7 Jet Black sababo la xiriira istiraatiijiyadda Apple.
ApexTech PXN-6603, ergonomic MFi kormeeraha iPhone-kaaga iyo Apple TV 4
Ma waxaad raadineysaa xakameyn ergonomic ah oo aad ku ciyaari karto ciyaaraha iPhone ama Apple TV? Maamulaha ApexTech PXN-6603 waa waxaad raadineysay.
Apple oo ka soo baxday Israel ayaa tilmaameysa iPhone 8 sanadka 2017
Sida laga soo xigtay qaar ka mid ah xogaha ka imanaya xafiisyada Apple ee Israel, magaca ay Apple u dooratay nooca soo socda wuxuu noqonayaa "iPhone 8"
Foxconn waxay labalaabaysaa awooddeeda ay ku dayactirayso iPhone
Ragga ku jira Foxconn waxay noqdeen tan iyo moodellooyinkii ugu horreeyay ee iPhone-ka ah qayb aasaasi ah oo ka mid ah qalabka ...
Qalabka Sonos wuxuu ku dhacay Apple Store laga bilaabo Oktoobar 5
Waxaan ogaysiinaynaa sida ku cad Sonos, kuhadalkooda PLAY 1 iyo PLAY 5 waxaa laga heli doonaa Apple Store laga bilaabo Oktoobar 5.
Buugga '2.0' wuxuu la qabsadaa macruufka 10, oo ah sawir qaadista ugu xirfadda badan iPhone-kaaga
Buugga '2.0', mid ka mid ah kamaradaha ugu dhammaystiran ee dhammaystiran ee ku yaal iOS App Store, kaas oo si buuxda uga faa'iideysta fursadaha macruufka 10.
MediaTrans, bedel weyn oo iTunes ah oo dareen leh oo shaqeynaya
Waa maxay? Sidoo kale ma jeceshahay iTunes si aad u maamusho waxyaabaha ku jira iPhone-kaaga? Hagaag, MediaTrans waa bedel aad u fiican oo aad u macquul ah oo hawlo badan qabta.
Sida loo shaandheeyo emaylka ku jira iOS 10 ee iPhone iyo iPad
Miyaad heshaa emayllo badan oo aad jeclaan lahayd inaad aragto qaar ka mid ah? Maqaalkani waxaan ku tusineynaa sida loo shaandheeyo emaylka ku jira iOS 10 ee iPhone ama iPad.
Farriimaha IOS 10: Sida loo Isticmaalo Xumbooyinka iyo Aasaasida Asalka
Miyaad horeyba u aragtay macruufka cusub ee 10 Messages goobooyin iyo taariikh nololeed? Haddii aadan wali aqoon sida loo isticmaalo, waxaan kuugu sharxi doonaa casharkaan.